Kedu ebe nkiri kacha adọrọ adọrọ na Netherlands iri? - Thrilltalk.com
Home/Special/Kedu ihe kacha mma iri mmiri na Netherlands?
0 28 Ejiri 4 gụọ
Na ihu igwe na-ekpo ọkụ, ịjụ oyi na ogige ntụrụndụ dị mma. Ọ bụghị ogige ọ bụla nwere nnukwu mmiri na-adọrọ mmasị na nso ebe nkiri na ọ bụ ya mere anyị ji nwee 10 kachasị na nke kachasị mmiri na-adọrọ mmasị emere maka gi. Echefula iso anyị na Facebook.
1. Osimiri Crazy // Walibi Holland
E wuru Crazy Osimiri na 1994 site na MACK Rides n’aha Walibi Flevo. Ọ bụ ihe kachasị ogologo osisi logure na-acha ọcha na Benelux. Flashback na Walibi Belgium nwere otu nhazi ahụ, na-eme ka ọ dị ogologo. Mma ahụ nwere ọsọ atọ; abụọ dị obere na otu nke dị mita 23.
N'oge nke Walibi Flevo, Osimiri Crazy bụ ihe kachasị mma nke mpaghara isiokwu "Canada". N'oge a, mmiri iyi ọcha ahụ dị na mpaghara isiokwu "Mpaghara Zero" na Walibi Holland.
Runway ogologo 524 m
Oke kachasị elu 23 m
Gbaa ịnyịnya oge 3 min 24 sec
Ike 1250 ndị mmadụ na elekere
2. Sungai Kalimantan // Adventure Park Hellendoorn
Sungai Kalimantan bụ osimiri dị ngwa na ogige ntụrụndụ Dutch Parkgbọ njem Park Hellendoorn.
Egwu ahụ mepere na 1997 ma wuru ya mgbe ahụ Bear Rides, nke a na - akpọzi Switzerland Rides. Sungai Kalimantan nwere 480 mita nke Osimiri Rapid kachasị ogologo na Netherlands. N'ime Benelux, naanị Radja Osimiri dị na Walibi Belgium ka ogologo.
Bogbọ mmiri ndị a dị gburugburu nwere oche 6 na ihe nkiri ahụ nwere ike ịnweta onye ọ bụla toro ogologo karịa 140 cm yana maka ụmụaka n'etiti 90 na 140 cm na ndị okenye.
Runway ogologo 480 m
ọnụ ọgụgụ nke ugbo ala Bogbọ mmiri 12
Ogwe nchedo Mba
Ike 6 mmadụ kwa ụgbọ
3. Osimiri Djengu // Isiokwu park Toverland
Osimiri Djengu mepere n’April 2013 n’otu oge ebe anwansi anwansi anwansi an’atu ebe nile di iche-iche n’ime mpaghara a. Ọ bụ otu n'ime ebe nlegharị anya kasịnụ nke Toverland na mma mmiri nke anọ. Ihe owuwu nke mma malitere na 2012. A na-arara ebe isiokwu nke osimiri Djengu dị na Dwervels, ndị akụkọ ifo. Isiokwu nke mma na-adabere kpamkpam na Dwervels. Animatronics nke Dwervels guzobere n’ebe dị iche iche yana gburugburu mma.
Osimiri Djengu bụ onye Hafema wuru ma nwee ogologo mita 460. N’ebe dị anya, ụgbọ mmiri ahụ ga-adaba na ndapụ nke mita 5,5 na nkeji anọ: nke ahụ na-enye ọsọ ọsọ nke 16 kilomita kwa elekere. Site na ụgbọ mmiri iri, mma a nwere ikike nke mmadụ 918 kwa elekere. Osimiri ahụ na-agba ọsọ nwere ihe egwu dị iche iche dịka ákwà mgbochi mmiri, nsụda mmiri, ọwara na Rapids. Ọ na-ejikwa mmetụta haze
Oke ọsọ 16,2 km / h
Runway ogologo 450 m
Oke kachasị elu 5,5 m
Gbaa ịnyịnya oge Nkeji 2:40
Ike 918 ndị mmadụ / awa
9 ndị mmadụ / ụgbọ mmiri
Onride foto Ugbu
4. Expedition Zork // Isiokwu park Toverland
Njem Zork bụ osisi ogwe mma na Dutch Okwu Park Toverland na na emi odude ke isiokwu ebe Wunder Wald. Osisi ogwe osisi ahụ sitere n'aka ndị na-ewu ụlọ German maka MACK Rides. Njem Zork dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke mpaghara ime ụlọ Wunder Wald. Routezọ dị obere na mpụga na nke ọzọ na nnukwu ọnụ ụlọ ma nwee ihu abụọ.
Runway ogologo 398 mita
Oke kachasị elu 15 mita
Gbaa ịnyịnya oge 225 sekọnd
Ike 6 ndị mmadụ / ụgbọ mmiri
5. Anụ Ọhịa Waterval // Hellendoorn Adventure Park
Osimiri Waterval (nke bụbu Osimiri Canada) bụ ihe na-adọrọ osisi na ogige ntụrụndụ Dutch Parkgbọ njem Park HellendoornEgwuregwu ahụ mepere na 1982 ma wuru ya site na mgbe ahụ MACK Rides. Mmiri mmiri bụ osisi mbụ nke osisi na-adọrọ adọrọ na Netherlands.
Gbọ mmiri ahụ nwere ihe ruru oche 5 n'usoro ma ọ bụrụ na onye ọ bụla toro ogologo karịa 120 cm nwere ike ịnweta mma ahụ na ụmụaka n'etiti 90 na 120 cm na ndị okenye. Mmiri mmiri na-eji ọdụ abụọ iji mee ka ntinye na npụpụ gaa ngwa ngwa.
Runway ogologo 390 m
Oke kachasị elu 12 m
Gbaa ịnyịnya oge 3 minuten
ọnụ ọgụgụ nke ugbo ala Max. Atsgbọ mmiri 14
Ike Max. 5 mmadụ kwa ụgbọ
E wuru El Rio Grande n'oge oyi nke 1994 mgbe Walibi Flevo weghaara Flevohof. Egwu a dị mita 375 n’ogologo ma wuo ya na Ugwu America. Egwu a wuru Vekoma.
Ọnọdụ Walibi Holland
Ofdị mma Osimiri na-asọ asọ
Onye na-ewu ụlọ (s) Vekoma
Bogbọ mmiri ọhụrụ 2017: Hafema
Onye ahịa Eddy Meeùs, Otu Walibi
Runway ogologo 375 m
7. Piranha // Nke Efteling
Piraña bụ osimiri dị ọsọ na ogige ntụrụndụ Dutch Efteling na Kaatsheuvel. Ihe nkiri ahụ, nke nwere aha ọrụ 'Rapid River', mepere emepe na May 18, 1983 site n'aka Mr. Pieter van Vollenhoven wee nweta aha ya ugbu a. Aha ndị ọzọ emere maka mma na ihe Ton van de Ven mere akara bụ Kon Tiki na Uru Bamba. Piraña bụ osimiri mbụ na-agba ọsọ na Europe imeghe.
Oke ọsọ ihe ruru. 20 km / h
Runway ogologo 350 m
Oke kachasị elu idebe 3 mita
Gbaa ịnyịnya oge ihe dị ka 5 min
ọnụ ọgụgụ nke ugbo ala 45
Ike ihe ruru. 2000 ọbịa kwa awa
8. Ripsaw Falls // Isiokwu ogige Slagharen
Ulo mmiri na-acha ọcha dị na mmalite nke ogige ahụ, n'akụkụ ọnụ ụzọ. N’afọ 1992, egwu a wuru Reverchon. Ihe na-adọrọ adọrọ nwere mkpọda abụọ, otu n’ime ha na-ese foto. Ridegba ịnyịnya na-ewe nkeji abụọ na sekọnd ise ma enwere ohere maka mmadụ anọ n'ime ụgbọ mmiri ahụ.
Gbaa ịnyịnya oge 02: 05
Ike 4/5 ndị ​​mmadụ na ụgbọ mmiri ọ bụla
9. ikwommiri // Ogige ntụrụndụ nke Duinrell
Ikwommiri bụ oge ịse-na-na na Dutch ogige ntụrụndụ Duinrell.
Emeghe na 1992, ndị ọbịa nwere ike ịhọrọ ụgbọ mmiri mepere emepe ma ọ bụ nke ekpuchiri ekpuchi. Ikwommiri bụ nke abụọ oge a gbaa-na-Chute na Europe na nke mbụ na Benelux. Na France, na 1989, Grand Splatch na Parc Astérix bụ nke mbụ oge a na-agbapụ-na-Chute na Europe.
Boatgbọ mmiri a nwere ike ịnabata ndị ọbịa 20, mgbe nke ahụ gasịrị, a na-atụnye ụgbọ mmiri ahụ dị elu nke mita iri na ise, mgbe nke ahụ gasịrị, ọdịda ahụ ga-ewere. N'oge mgbada a na-eru ọsọ nke ihe dịka 55 km / h.
Ndị na-ekiri ihe nkiri ahụ nwere ike iguzo n'azụ ihuenyo na ala nke 'slide'.
Oke ọsọ 55 km / h
Runway ogologo 228 mita
Ogwe nchedo hip mgbodo
10. Osimiri Jungle // Drievliet Family Park
Osimiri Jungle bụ osisi na-adọrọ mmasị na ogige ntụrụndụ Dutch Dutch Familiepark Drievliet. Ihe mmado a wuru Reverchon wee meghee na 1997.
Ndị ọbịa ga-anọdụrịrị na "ogwe osisi", nke nwere ike ịnabata mmadụ anọ karịa. A na-eweli ogwe osisi a ugboro abụọ n'ogologo nke mita 225 na eriri ebu, mgbe nke a gasịrị, otu mkpụrụ ga-esochi mgbe ọ bụla ebulichara. Oge izizi dị mita asaa n’ogologo. Oge nke abụọ dị elu karịa nke abụọ ma nwee elu nke mita 7. Ozugbo oge nke abụọ, a na-ese foto nke ndị ọbịa nwere ike ịzụta na npụpụ.
Duinrell Na-agbatị Europa Njem Zork Hellendoorn nwere ike tiki mack agafe osimiri ngwa ngwa tọn fen Vekoma Otu Walibi Walibi Holland mmiri na-adọrọ mmasị